Kudzidza Kubva Kuna Sekuru Nasekuru Vakaremara
Kunyangwe sekuru nasekuru vangave vachidemba pamusoro pezviitwa zvavasingachagone kuita nevazukuru vavo nekuda kwekuremara kwavo, vanogona kupa mukana wakakosha wekudzidza kuratidza vazukuru vavo maitiro ekubata nevanhu vakaremara.
Ukama huripo vakaremara vanasekuru nasekuru vavo vanokurirwa nekutanga kwekukanganisa. Vamwe vazukuru havana kumboziva vanasekuru vavo kuva vanhu vane hutano hwakakwana, nepo chiitiko chinowanzoitika kana vazukuru vachiona vanasekuru vavo vachikundikana zvishoma nezvishoma.
Kutandara nevazukuru kunogona kunge kunonetesa. Kune vanasekuru nasekuru vakaremara, matambudziko akawedzerwa. Kudya zvinovaka muviri, chirongwa chakakodzera chekusimbisa muviri uye kuzorora kwakawanda kunobatsira, asi kuchengetedza chimiro chakakura chepfungwa kwakakosha zvakanyanya. Sekuru nasekuru vane hurema hwakawanda vakapa mazano anotevera anobatsira:
Ruzhinji rweasekuru nasekuru vakaremara vakagadza nzira dzekugadzirisa saka ivo vanokwanisa kuramba vachinakidzwa nevazukuru. Nekudaro, kupera simba inyaya kune vanasekuru navanamai uye inogona kuve nyaya hombe kune avo vane kuremara. Kuwana zororo rakakwana kunogara kuri kwekutanga nzira yekuzvidzivirira kubva kuneta. Kutora mabhureki mapfupi kuti udzorezve zvinogara zvichibatsira.
Vana vadiki vanoda kuziva, uye vazukuru havana kusiyana. Ruzhinji rweasekuru nasekuru vakaremara pane imwe nguva vachatarisana nemibvunzo kubva kuvazukuru vavo. Chinokosha ndechekupindura kune yega yega kunetsekana nenzira yavanokwanisa kunzwisisa pazera ravo.
Vanasekuru navanasekuru vakaremara vanoziva kuti vazukuru vavo vanenge vachikura vakangwara uye vanonzwira tsitsi nekuda kwekuratidzwa kwavo kuremara. Vanasekuru vanowana chidzidzo chakakosha chekutarisa kupfuura hurema hwemunhu, dzinza, zera nezvimwe uye nekudzidza zviri mukati izvo zvakakosha chaizvo. Mune mamwe mamiriro ezvinhu vazukuru vanogona kuva makuru echando anotsemura kunyanya kana vanhu vasingazive vanowanzo tarisa.
Chimwe chidzidzo chakakosha icho vanasekuru vanogona kupfuudza ndechekuti hupenyu hausi nyore nguva dzose asi vazukuru vanogona kukunda chero chipingamupinyi nekutenda uye neushingi.
Kutaura nyaya ndehumwe hukama hwakakosheswa pakati pasekuru nasekuru nevazukuru. Sekuru nasekuru vane mashoma kufamba achiri kugona kutaura nyaya kungave kubva muchiitiko kana kubva pakuverenga mabhuku. Izvi zviitiko hazvidi chiitiko chakati wandei asi zvichiri kunakidza kune vese sekuru nasekuru. Uyu zvakare mukana wakakura wekuti sekuru vapase zvidzidzo pamusoro pechiitiko chekuva munyama remara uye sei iyo kuremara inogona kukurirwa nehunyanzvi uye moyo murefu.
Kufamba kwaSekuru nasekuru
Vanasekuru vane zvishoma kufamba vanogona kugovana hunyanzvi hwavo ne vazukuru vavo. Kunze kwekudhirowa kwakajairwa uye kupenda.
Kufamba kuna vanasekuru kunogona kunakidza asi kungangoda kuronga kwekuwedzera. Vanasekuru vanogona kunakidzwa mupaki nevazukuru vavo uye kunyange kuvapa kukwira mumagetsi avo emagetsi wiricheya kana sikuta.
Chinhu chinoshamisa ndechekuti vazukuru vanokurumidza sei kuchinjika kuremara kwasekuru. Vamwe vazukuru vanomboziva zvavo zvekuita uye maitiro ekubata nawo epanyama remara sekuru. Zvidzidzo zvinodzidziswa kubva kuhukama uhwu zvichave zvakanaka zvidzidzo zveupenyu kumuzukuru izvo zvinogona kushandiswa kumatambudziko akasiyana-siyana avanosangana nawo mushure mehupenyu.